ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး | Page 18 | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
24.5.2016 | ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တာဟာ ကြီးထွားလာတဲ့ သန္ဓေသားက စွမ်းအင်သုံးစွဲနေတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်သလို သွေးအားနည်းခြင်းကို ဖော်ပြတာလည်ြး...
20.5.2016 | ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး
မိခင်သောက်သုံးလိုက်သောကော်ဖီသည် နို့ရည်မှတဆင့် ကလေးငယ်ဆီသို့ရောက်သွားတာကြော...
သားအိမ်ခေါင်းချွဲကိုကြည့်ပြီး မျိုးအောင်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ ခန့်မှန်းနိုင်
13.5.2016 | ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး
1. အဖြူရောင်သားအိမ်ခေါင်းချွဲ - မျိုးပွားမှုကောင်း
ရာသီပြီးတဲ့နောက် သားအိမ်ခေါင်းချွဲများလာတာကို သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင် လိုက်နာသင့်သော အခြေခံကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်ချက်များ
10.5.2016 | ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး
1. အရင်ဆုံး သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန်နှင့် စောနိုင်သမျှစောအောင် ကိုယ်ဝန်အပ်ရပါမယ်။ ဆရာဝန်နှင့်ဝေးတဲ့ဒေသဖြစ်ပါက ဒေသန္တရကျန်းမာရေးဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ပြသနိုင...
6.5.2016 | ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး
ရေဟာနို့ထွက်ကောင်းစေဖို့အတွက် အဓိကအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နို့ကောင်းကောင်းထွက်ဖိ...
ရေမြွှာရေနည်းခြင်း နှင့် များခြင်း
3.5.2016 | ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ အထူးရှောင်ရှားသင့်တဲ့ BPA
20.4.2016 | ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး
သမီးမိန်းကလေးကို လွယ်ထားရသော ကိုယ်ဝန်ဆောင်များအနေဖြင့် BPA (Bisphenol A) ဓာတုပစ္စည်းနဲ့ ထိတွေ့မရှိအောင် ရှောင်ရှားဖို့ အထူးသတိပြုသင့်ပါတယ်...
5.4.2016 | ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး
ရေမြွှာရေဆိုသည်မှာ ပဋိသန္ဓေတည်ပြီးနောက် 12 ရက်အကြာမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အ၀ါရောင်အရည်ကြည်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေမြွှာရေမှာ များစွာသော အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ဆောင...